Ny fiara vita amin'ny fiara vita amin'ny fiara China Manufacturer
Description:Ireo mpanamboatra sary hosodoko amin'ny fiara,Fametanan-tsolika ho an'ny fiara Nz,Car Paint Coating Philippines
Home > Products > Olana fikarakarana fiara > Crystal Wax Plating > Ny fiara vita amin&#39;ny fiara vita amin&#39;ny fiara
Ny fiara vita amin'ny fiara vita amin'ny fiara
Model No.: TUWF-131B
Type: Other, Coating
Active Ingredients: Polysilicon,Fluorosilane,water
Functional: Car Body Protection
Product Characteristics1: Bright And Smooth
Product Characteristics2: Anti-stain
Product Characteristics3: Anti-scratch
Feature1: High Gloss
Feature2: High Hardness
Toetra mampiavaka ny Crystal Crystal:
Mamirapiratra sy malama, anti-takelaka ary manohitra.
Vokatra ity dia ampiasaina amin'ny loko fikojakojana fiara, manana gloss avo, avo ny hamafin'ny, anti-tasy sy ny anti-Scratch, Ultra-malama, anti-asidra ny orana sy ny asa hafa, mandrakariva mikarakara ny lacquer Mamiratra toy vaovao.
Ny vokatra dia polymer, Manamboatra lavarangana kapillary sy alika kely eo anelanelan'ny famaranana nandoko, ny fiforonan'ny Superhydrophobic eo amin'ny marika loko.
Sarimihetsika nano efa mihetsika ela.
Arosoy moramora alohan'ny hampiasana azy, avy eo dia ny famafazana fanamiana eo amin'ny sarin'ny loko
(Manolora fananganana fisarahana, miparitaka moramora), avy eo manadio amin'ny lamba famaohana madio sy maina mandra-pahazavana ny mason-doko ary tsy misy soritra, vita ny fananganana.
1. Manalavira ny zaza.
2.Raha tonga eo imasonao ianao, dia sasao amin'ny rano. Raha matotra ny zava-misy, dia mitadiava mpitsabo.
3.Misy toerana amin'ny toerana mangatsiaka sy maina.
4.Afatra aorian'ny fandosirana dia tsy maintsy hosorana mandra-pahazavana ny loko.
Amponga mavitrika: Polysilicon, Fluorosilane, rano
lanjan'ny net: 120ml
Product Categories : Olana fikarakarana fiara > Crystal Wax Plating
Hareza mahery sy ranom-panafody mivolom-bary mivelatra Contact Now
Car Body Paint Vitrana mikarandona Crystal Wax Plating Contact Now
Anti-scratch Fiompiana ranom-boasary Contact Now
Auto Care Car Crystal Wax mamelatra voa Contact Now
Taratasy hosodoko ho an'ny fiara Auto Contact Now
Fiarovana tsara ny fiara amin'ny fiara tsara indrindra Contact Now
120ml Car Paint Coating Fiarovana Contact Now
120ML Car Paint Nano Coating Contact Now
Ireo mpanamboatra sary hosodoko amin'ny fiara Fametanan-tsolika ho an'ny fiara Nz Car Paint Coating Philippines Famonosana ny sary hoso-doko amin'ny fiara Taratasy hoso-doko ho an'ny fiara Ny saram-bolo amin'ny sary hoso-doko amin'ny fiara Ranomainty mpanamboatra hoditra amin'ny hoditra Taratasy hosodoko amin'ny fitaratra fitaratra